Ukungabikho koluntu kwinqanaba labasetyhini
Oogqirha banokwabelana ngeentlobo ezimbini ezibalulekileyo zokungabikho kwabasetyhini - eziziiprayimari nezesekondari. Uhlobo lokuqala ukungabikho kwithuba lokukhulelwa kulo lonke ixesha lokuphila. Ukungabikho kolwazi olungasesekondari - oku kukwazi ukukhulelwa umntwana ngenxa yokukhishwa kwesisu kwangaphambili, ukukhulelwa kwesisu, ukukhulelwa kwe-ectopic okanye ukungaphumeleli kokuzalwa kokuqala.
Ngokweminyaka, abafazi bazala, oko kukuthi, ukukwazi ukukhulelwa ngokukhawuleza kuwa. Xa uneminyaka engamashumi amathathu anesihlanu, ama-25% kuwo onke amabhinqa aphethwe yi-physiologically infertile. Ukususela kwiminyaka eyi-18 ukuya kwe-30-yeminyaka yobudala, xa ukukhulelwa kukugqwesileyo. Ukuthunyelwa kwezizathu ngezizathu ezahlukahlukeneyo zokuzalwa komntwana, lona wesifazane uzinikezela engozini yokuhlala engenabantwana okanye ukukwazi ukuzala umntwana kuphela ngeenkqubo zonyango ezixakekileyo ezenzelwe ukunyanga ukusetyenzwa kwexesha elide. Ngomnyaka kwiinguqu ze-ovaries chromosomal iinguqu zenzeke kwizifo, ukuzalisa ukungabikho komntwana kunye nokwandisa amathuba okuzalwa komntwana oswelekileyo ngokomzimba nangokwengqondo. Ukuphuphuma kwesisu okungafunekiyo kunyuke kakhulu kwiminyaka engama-35.
Ukunyaniseka kwesifo se-thyroid
Ukwandiswa kwemveliso ye-hormone ye-thyroid igxininisa ukuveliswa kwee-hormone eziyimfuneko ekwakhekeni kwethambo le-pituitary. Yile nxalenye yengqondo echaphazela ukuveliswa kwee-hormone kwintlobo yesini yabasetyhini. Ukuba ama-hormone akhiqizwa ngaphantsi kokumiselweyo (okanye ngaphezulu), kwaye ngokungazelelwe aphule umjikelezo oqhelekileyo wokuya esikhathini. Kukho umngcipheko ophezulu weimeko eziyingozi - i-endometriosis, i-polycystic ovary syndrome kunye ne-myoma ye-uterine. Ukuqala kokukhulelwa kunye nokuthwala umntwana osemtshatsheni ophelileyo uya kuphazamiseka kakhulu.
Ukuqhelaniswa kwemisebenzi ye-thyroid kwenza kube lula ukuba ukhulelwe kwaye emva koko uzale umntwana ophilileyo. Kodwa amanye amayeza ngexesha lokukhulelwa kuya kufuneka avunyelwane nogqirha.
Kwinkwenkwekazi, ukungakwazi ukukhulelwa ixesha elide kubangelwa zizi zifo ezi ziingozi:
ukuvuvukala kwama-ovari kunye nezigubhu ze-fallopian, umlomo wesibeleko kunye nesisu;
i-endometriosis kaninzi ibangela ukuphazamiseka kwesinye okanye ezimbini kwimizuzu emibini ye-fallopian;
ukuphuma kwintsholongwane engavumelekiyo
Iingxaki emva kokuphumelelisa isisu
Ukuqhwaba ngexesha lokukhipha isisu kungawonakalisa kakhulu umgca we-endometrium. Ngaloo ndlela iifollic zivuthiwe zivuthwe, kodwa kwi-uterus aziqhotyoshelwanga. Eli tyala lihlelwa njengoluqilima. Ukungagqibekanga ("phantsi komhlaba") ukukhipha isisu nokungaphumeleli ukukhipha isisu kwiiklinikhi kubangela ezininzi iingxaki. Ipesenteji yomngcipheko ihlala kunye nomsebenzi wamava, iminyaka emininzi yoogqirha abaqeqeshelayo. Ngenxa yoko, ibhinqa ibhekene nokungakwazi ukukhulelwa emva koko.
Ukulimala kwamalungu omzimba
Ulwaphulo oluninzi lwe-perineal, iingxaki eziqhubekayo emva kokusebenza, iingxaki ezingaphendulwanga, ukubambisana okanye iipolisi zizo zonke zezizathu zokungabikho. Nangona kunjalo, ezi zizathu zihlala zichongiwe ngokukhuselekileyo. Inkambo yokonyango ivumela umfazi ukuba abe ngumama wabantwana abasempilweni.
Intsha yanamhlanje yokukhulelwa kukutya kunye ne-anorexia. Ukungabikho kwintlondi kungakhokelela naku: izifo ezikhupha izifo, ukuxiliswa okungapheliyo kunye nokungaqhelekanga, ukungondleki ngokwaneleyo.
Olu xilongwe lwenziwa kwiibini ezingenazo abantwana emva konyaka okanye ngaphezulu ezihlala kunye-kuphela kwi-20% yamatyala. Nangona kunjalo, akukho zizathu zonyango zokungabikho kokukhulelwa, oogqirha abanamandla okunceda into ethile. Yiyo imeko xa kwenzeka, ukukhulelwa akukhona iminyaka, kwaye ummangaliso uye kwenzeka kwaye umntwana ophilileyo uyazalwa.
Unyango lwe-endocrine infertility luquka ukulungelelaniswa kwemisebenzi ye-adrenal kunye ne-thyroid ngokusebenzisa ukusetyenziswa kweziyobisi ezikhuthaza u-ovulation. Izigulane ze-chorionic gonadotropin nazo zinceda. Ukongezelela, iindlela ezahlukeneyo zokupasa zikhokelela kwiziphumo ezilungileyo - ukuthengiswa kwemida okanye i-cautery ovarian. Ngenxa yokungabikho komntwana wesibini, ukuphela komzimba, i-endometriosis yomzimba, inkqubo yokubambelela emathambo kwiphondo ye-pelvic, izinto ze-tubal, ii-polyps nezinye izifo ze-uterus nazo zingadibana.
Ilungelo elifanelekileyo xa umntwana elele esibelethweni?
Izizathu zokuxhalabisa kwi-trimester yesithathu
Ukulala ngesondo ngexesha lokukhulelwa
I-Gymnastics yabasetyhini abakhulelweyo ngenyanga yesi-7
Amazinyo anempilo kunye namazinyo ngexesha lokukhulelwa
Ikhalenda lokukhulelwa ngoMatshi 2014: ngubani oya kuba ngumntwana wakho?
Intlanzi nge marinade
Kutheni sifuna ngokwenene okanye asifuni ukutshata?
Isidu kunye neetamatato ezintsha
Kutheni umntwana evuka kakhulu?
Njengama-50 abaziva bephilile kwaye banwabile ngakumbi kunama-25
IiSaladi zoNyaka omtsha 2018 Izinja, iindlela zokupheka kunye neefoto kunye namavidiyo - izandi ezintsha ezilula kwaye ezihlwabusayo
Ukujamelana noxinzelelo olulindelekileyo kuyo yonke indawo
Izinto zokuzilibazisa zezingane kunye nezinto zokuzilibazisa
Ukuba umntu uthanda ukutsala ixesha
Ubomi ukususela ekuqaleni okanye ngoMsombuluko
Indima yemfundo yemvelo ekuphuhlisweni komntwana
Unokukhusela njani iinwele zakho kwiqhwa, umoya kunye neqhwa?
Unokuyithintela njani isimo sengqondo kusasa